Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 27/03/2020)
Na izany aza, izay fomba fitaterana no tsara indrindra? amin'ny Save A Train, dia mazava ho azy isika ary mihevitra fa mitongilana fiaran-dalamby mandeha dia amin'ny alalan'ny lavitra ny manam- karazana fitaterana! Vakio amin'ny ambany mba hahitana izay tsara kokoa ary aoka isika ho ao amin'ny lahatsoratra mitsoraka ny fiarandalamby mandeha oharina amin'ny fiaramanidina Tsidika.
Air Travel dia fantatra ho iray amin'ireo fomba haingana indrindra hahatratra ny toerana halehany, na izany aza, izany dia afa-mandray ny fiaramanidina mihitsy ho fiheverana. Ahoana lavitra mialoha ny fiaramanidina no tsy maintsy tonga mba hiampita ny lava maso-in sy ny fiarovana tsipika? Raha toa ianao ka teny an-kitapo tsy maintsy miandry ny manangona izany rehefa tonga - tamin'ity indray mitoraka ity mandany. Tsy toy ny seranam-piaramanidina, amin'ny gara tsy misy maso-ins na fiarovana andalana, ka tsy voatery ho amin'ny gara ora alohan'ny diany. Most lehibe gara dia hita tsara ao am-pon'ny amin'ny tanàna koa dia manompo. Ny ankamaroany rehefa mandray ny fiaran-dalamby, ianao tonga mivantana eo amin'ny toerana halehany. Na izany aza, naka fiaramanidina, ianao no afaka manokana ora maro ary mahazo ny avy any amin'ny seranam-piaramanidina.
Train mandeha koa dia mamela anao mandeha aina amin'ny niankohoka biby. maro ny biby fiompy tsy mety ny mandeha fiaramanidina noho ny ara-pahasalamana, taona na karazany.
mpandeha amin'ny Eoropa fiarandalamby Mety ho alika, ny saka sy ny biby kely amin'izy ireo sy ny ankamaroan 'ny fotoana vola lany amin'ny tsy misy fanampiny!
Raha mila fanazavana fanampiny, Follow Save A Train on Facebook, Instagram Account ary Twitter Kaonty.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)